सोमवार, जेठ ३, २०७८ केशरराज क्षेत्री ,
रेडिमेट जवाफ दिँदै भन्छन्, ‘लागिपरेकै छौँ’
प्यूठान : दोस्रो लहरको कोरोनाले प्यूठान पनि पीडामा छ । कोरोना संक्रमणकै कारण जिल्लामा अहिलेसम्म ३३ जनाले ज्यान गुमाइसके । स्वर्गद्धारी नगरपालिकामा ९ जना, माण्डवी गाउँपालिकामा ५ जना, मल्लरानीमा ४ जना, प्यूठान नगरपालिकामा ४ जना, सरुमारानीमा ३ जना, झिमरुकमा २ जना, ऐरावतीमा ३ जना, गौमुखीमा २ जना र नौवहिनी गाउँपालिकामा १ जनाको मृत्यु भइसक्यो । २४ जना संक्रमित व्यक्तिहरुको जिल्ला स्तरीय आइशोलेसन केन्द्रमा उपचार चलिरहेको छ । ६ सय व्यक्तिहरु कोरोनाबाट संक्रमित छन् ।
सरोकारावला निकायहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहलकदमी गरिरहेका छन् । छिमेकी जिल्लाहरुको तुलनामा जान नसकेपनि जिल्लामा कोरोना संक्रमण रोक्न प्रयास भइरहेका छन् । नागरिकहरुले यही बेला जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको भूमिका खोजिरहेका छन् । महामारीका बेला उनीहरुले आफ्ना नागरिकहरुको जीवनरक्षाका लागि गर्नुपर्ने पहल र भूमिकाको आशा गरेका छन् । जनताका पीडा सुन्नका लागि जिताएर पठाएका माननीयहरुसँग नागरिकहरुको भरोसा हुनु स्वाभाविकै हो ।
तर, नागरिकहरुको आशा अनुसार जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले दायित्व पुरा नगरेको सर्वत्र चर्चा चलिहरेको छ । प्रतिनिधी सभाका लागि एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्यूठानमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलको संघीय संसद्मा प्रतिनिधीत्व छ । पहिलो लहरको कोरोनादेखि नै उनले संक्रमण रोक्नका लागि देखिने खालको कुनै पनि काम नगरेको नागरिकहरुले आरोप लगाएका छन् ।
‘संकटको बेला नागरिकहरुले हारगुहार गर्ने आफ्ना जनप्रतिनिधीलाई नै हो’,नेपाल बार एशोसियसन प्यूठानका पूर्व अध्यक्ष एवं केन्द्रिय सदस्य डा.शिवराज पण्डितले भने,‘जनताले खोज्ने बेला जनप्रतिनिधी नभेटिनु भनेको उनीहरु जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने बुझिन्छ ।’ जनताको दुःखमा साथ नदिएपछि उनीहरु जनप्रतिनिधी भएको ठहर नहुने समेत उनले विचार व्यक्त गरे ।
‘सांसद्हरुले कित त सरकारमा हाम्रो पहुँच पुगेन भन्नुपर्यो’,पण्डितले भने,‘होइन् भने जनसरोकारका विषयमा किन चासो नदिने ?’ उनीहरुको भूमिका निष्क्रिय हुनु गैर जिम्मेवारीपूर्ण रहेको पण्डितले बताए । जनप्रतिनिधीहरु फ्रन्टलाईनमा आउन समेत उनले सुझाए ।
सांसद्हरुको भूमिकाप्रति नागरिकहरु सन्तुष्ट नदेखिएको नेपाल पत्रकार महासंघ प्यूठानका अध्यक्ष सञ्जय रिजालले प्रतिक्रिया दिए । ‘सत्तापक्षमा भएका सांसद्हरुले काम गरेजस्तो देखिन्छ’,उनले भने,‘तर, अन्य सांसद्हरुको देखिने गरी जिल्लामा काम भएन् ।’ प्रतिपक्षका सांसद्हरु संकटको बेला अझ क्रियाशिल हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । देखिने गरी सांसद्हरुको भूमिका नभएकाले सक्रियता बढाउन उनले सुझाव दिए ।
जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट संचालन, जिल्ला अस्पतालको सेवा प्रवाह सहित क्षमता वृद्धि र आइशोलेसन केन्द्रमा जटिल उपचार गर्ने व्यवस्थापनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको क्रियाशिलता नागरिकहरुले खोजिरहेको रिजालले बताए ।
आफूहरुले चाहेको बेला हजारौँ जनता फिल्डमा उतार्न सक्ने नेता, सांसद्हरुले महामारीको बेला नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको नागरिक समाजका अगुवा एवं विजुवारका व्यवसायी लोक बहादुर बस्नेतले सुनाए । ‘उहाँहरुले व्यक्तिगत रुपमा त काम गर्नुभएकै होला । सामान्य नागरिकलाई चिन्ता हुन्छ भने उहाँहरुलाई पनि होला । तर, देखिने गरी नेतृत्वदायी भूमिकामा सांसद्हरु देखिनुभएन् ।’सामान्य नागरिकहरुको जस्तो मात्र भूमिकामा नरहन् उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई सुझाव दिए ।
प्रदेशका केही सांसद्हरुले काम गरेपनि संघीय सांसद्हरुले देखिने परिणाम अनुसार सहयोग नभएको जिल्ला स्तरीय आइशोलेसन केन्द्रका संयोजक एवं प्यूठान नगरपालिका नगरप्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपतीले जानकारी गराए । ‘काम गर्नेले गरेको ग्यै छ, नगर्नेहरु नगर्ने छन् । फिल्डमा कति समस्या चुनौती व्यहोर्नु परेको छ । पैसा भएर मात्र केही हुने होइन् ।’ समुदायस्तरमा काम गर्न स्थानीय तहहरु भएको बताउँदै उनले प्रदेश र संघीय सरकारबाट सहयोग गरिदिन उनले नेतृत्वलाई आग्रह गरे ।
के भन्छन् माननीयहरु ? (उनीहरुकै शव्दमा)
दुर्गा पौडेल,प्रतिनिधी सभा सदस्य
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लगातार सम्पर्क गरिरहेका छौँ । सम्वन्य गरेका छौ । काठमाण्डौँमा पनि पनि नभएको अवस्था छ । जनतासँग तत्काल गएर भन्दा पनि टेलिफोनमा कुरा गरिरहेरेका छाँै । फिल्डमा जाने अवस्था छैन् । गर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छौँ । फोन हानिरहेका छौँ । फोनमा सम्वन्य गरेको जनतालाई सवै कुरा थाहाँ हुने कुरा पनि भएन्, त्यो स्वभाविक हो । तर हामीले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेका छौँ । केन्द्रमा जाँदा हामीलाई संघीयता हो, पहिलेको जस्तो अहिले माग नगर्नुस्, संघीयता आएको तपाईहरुलाई थाहाँ छैन् र ? भनेर उल्टै प्रश्न हामीलाई मन्त्रालयमा गर्नुहुन्छ । प्यूठानका लागि केन्द्रले छुट्टाएको बजेट र स्वास्थ्य सामग्री पनि पनि प्रदेश हुँदै जिल्लामा जाँदो रहेछ । अक्सिजनको समस्या देशभरीकै समस्या हो । कोभिडमा हामीले जति आवाज उठाएको त अरु कसले होला र ? ’
हरि प्रसाद रिजाल (प्रमुख स्वकीय सचिव, इन्द्रमणी पोखेरल मार्फत)
‘खाली भएका अक्सिजन नियमित रुपमा भर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीसँग सम्वन्य भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट साप्ताहिक रुपमा योजना बनाउने र आवश्यक सामग्रीको माग अनुसार अस्पताललाई व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको छ । अक्सिजन सिलिण्डर थप गर्ने विषयमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बारम्बार सम्वन्य भइरहेको छ । उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री भएको दिनमा जिल्ला अस्पताललाई १० लाख र कोभिड खर्चका लागि ५ लाख रुपैयाँ बजेट पठाउने निर्णय अनुसार कार्यान्वयनमा गएको छ । मन्त्री ज्यू, आइसकेपछि भएका काम यी हुन् । राजनीतिक दलबाट चुनाव लड्ने र अहिले नागरिक समाज भनेर प्यूठानमा गठन भएको प्रति मन्त्री ज्यू, पोजेटिभ देखिनुहुन्न । काम नगर्दै यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने मन्त्री ज्यूको बानी छैन् । काम गरेपछि मात्र बाहिर ल्याउने योजना छ । हामी काम नगर्दै धेरै प्रचार प्रसार गर्दैनौ । जिल्लामा स्वास्थ्य सामग्री अभाव हुन नदिने मन्त्री ज्यूको योजना छ ।’
कृष्णध्वज खड्का, प्रदेश सभा सदस्य
‘सांसदले नै आफै स्वास्थ्य सामाग्री बोकेर जाने स्थिति छैन । म त्यसमा अलि सहमत पनि छैन । राज्यका निकाय छन् संयन्त्र छन् तिनीहरूले सिस्टममा काम गर्नपर्छ । प्रदेस र केन्द्रिय राजनीतिमा देखा परेको पछिल्ला परिस्थितिले पनि कोभीडको उपचार रोकथाम तथा नियन्त्रणमा हामी राजनीतिकर्मी पनि भएकोले सोचेजती लाग्न पाइएन जस्तो लाग्छ । म नियमित सम्पर्कमा छु, सम्बन्धित ठाउँमा आवश्यक पहल गरिरहेको छु ।’
तारा जिसी, प्रदेश सभा सदस्य
‘चासै नदिएको भन्ने होइन । प्यूठानबाट रित्ता सिलिण्डर बुटवल जाँदा तुरुन्तै भर्न भनेका छौँ । रुपन्देहीका सिडियोलाई बारम्बार सहयोग गर्न भनेका छौ । अक्सिजन अभाव हुन दिएका छैनौ । हामीले गरेको काम तपाईहरुले नदेखेर मात्र हो । हामीले काम ग्यौँ भनेर भन्दै हिडेको भए मात्र तपाईहरुले देख्नुहुन्थ्यो होला । केही समस्या हुँदा हामीले बोल्दै नबोलेको भन्ने छैन् । हामीले तपाईहरुलाई भन्न मात्र नसकेको हो । के अभाव भएको छ ल भन्नु त ? हामीले मन्त्रीसँग भेट गर्ने गरेका छौँ । प्यूठानका डाक्रहरुसँग के आवश्यक छ भनेर सोँधिरहेका छौँ । जिल्ला सम्वन्य समितिसँग सम्वन्य भइरहेको छ ।’
पहिले स्वास्थ्य र पछि ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री बनेका सांसद् हरि रिजाल प्रदेशको मुकाम बुटवलमा छन् । उनले स्वास्थ्य सामग्री र अक्सिजन जिल्ला लैजानका लागि पहल गरिरहेको प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्रमणी पोखरेलले बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट लुम्विनी प्रदेशमा सांसद् बनेका कृष्णध्वज खड्का काठमाण्डौँमा छन् । टेलिफोनमा चासो व्यक्त गरेपनि उनले ठोस रुपमा देखिने काम गरेका छैनन् । कोभिड शुरु भएपछि उनी जिल्लामा समेत नफर्किएको नागरिकको गुनासो छ ।
राजमोबाट समानुपातिक सांसद् बनेकी तारा जिसी आफ्नो घर झिमरुक गाउँपालिकामा छिन् । कोरोना नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेतृत्वदायी रुपमा उनको भूमिका नागरिकले अनूभुति हुनेखालको नदेखिएको गुनासो छ ।
प्रतिनिधी सभा सदस्यमा राजमोबाट चुनाव जितेकी दुर्गा पौडेल काठमाण्डौँ छिरेपछि विरलै जिल्ला फर्किने जनप्रतिनिधीमा पर्छिन् । जिल्लाबासीको पीडा, समस्या र महामारीमा उनको भूमिका प्रायः शून्य जस्तै हुने गरेको जनस्तरमै चर्चा सुनिन्छ । पहिलो चरणदेखि दोस्रो चरणको कोरोना र अन्य विकास निर्माणका सवालमा उनको पहलकदमी नभएको नागरिक समाजका अगुवाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधी नभएपनि खानेपानी मन्त्री बनेका एमाले नेता मणी थापाले यसै साता तीन लाख रुपैँया बरावरको स्वास्थ्य सामग्री जिल्ला पठाएका छन् । तर, पदिय हैसियत अनुसार उनको उक्त सहयोग सामान्य नागरिकले गर्नेजस्तै भएको जिल्लाबासीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, जेठ ३, २०७८, १२:३८:०९